mairie-antananarivo – 03 Mey 2017: Tsingerin-taona nahaterahan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana
03 Mey 2017: Tsingerin-taona nahaterahan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana
auteur 3 may 2017 Commentaires fermés
Ho fanamarihana ny tsingerin-taona nahaterahan-dRamatoa Lalao RAVALOMANANA Ben’ny Tanànan’ Antananarivo Renivohitra ny 03 May 2017 dia nisy ny lanonana tsotra nefa manandanja izay niarahany tamin’ny mpiara-miasa aminy tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely.
Nomarihany nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony fa faniriany ny hirotsahan’ny Fiadanana ho an’ny tokantrano tsirairay, nentaniny ihany koa ny mpiara-miasa aminy mba tsy ho kivy amin’ny fanatanterahanan’ ny asa, na eo aza ny fanenjehana sy fanaratsiana ny Kaominina Antananarivo izay ataon’ireo tsy tia.
Niasaotra an’ireo mpiara-miasa ihany koa ny Ben’ny Tanana amin’ny fanatrehana ny lanonana. Nandritra izany dia nisy ny Fotoam-pivavahana fohy nisaorana sy niderana an’Andriamanitra ; avy eo dia nifampizara ny mamy tamin’ireo mpiara miasa aminy izy mba ho mamy hatrany ny fiarahamiasa amin’ny fanarenana sy fampandrosoana ny Tanàna.